Podcast 2x07 an'ny Actualidad iPad: clones Netflix, Apple Music ary iPhone | Vaovao IPhone
Fizarana vaovao amin'ny podcast Actualidad iPad izay hiresahantsika ny fahatongavan'i Netflix any Espana. Serivisy streaming malaza indrindra manerantany farany tonga eto amin'ny firenentsika saingy miaraka amina katalaogy izay niteraka ny tsy fahafalian'ireo mpampiasa maro Nanantena karazana atiny maro karazana izy ireo. Ho fanampin'izany izahay dia manome lanja ireo mpampiasa Apple Music 6,5 tapitrisa izay nijanona niaraka tamin'ny serivisy taorian'ny nifaranan'ny fotoana maimaim-poana, ary momba ny HTC vaovao natolotra androany izay kopia karbona manjelanjelatra amin'ireo iPhones vaovao. Halahelo azy ve ianao?
Henoy ny »2 × 07: klone Netflix, Apple Music ary iPhone» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » 2 × 07 Podcast an'ny Actualidad iPad: clones Netflix, Apple Music ary iPhone